TANAMAKOA - TOAMASINA : Fiara sy posy nifandona, lehilahy iray maty tsy tra-drano
Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina indray no nitranga tao amin’ny fokontanin’i Tanamakoa ao amin’ny Distrikan’i Toamasina I ka lehilahy iray mpitondra posy antsoina hoe Rafidy hatreto no fantatra fa namoy ny ainy nandritra ny fifandonana. 20 novembre 2017
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny mpitandro filaminana dia , ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 9 ora maraina tany ho any no nitranga ny loza ka “cyclo-pousse” iray sy fiara marika Citroen no voalaza fa nifandona mafy. Nandeha mafy loatra ilay fiara raha ny filazan’ireo nahita maso ka voafaoka tsy fidiny ilay mpitondra posy. Fantatra ihany koa fa nisy olona iray hafa naratra mafy saingy efa eo am-panatanterahana fitsaboana ny tenany ankehitriny.
Taorian’izay tranga izay dia taitra ny rehetra raha toa ka nitsoaka nirifatra ny fiara ary mbola tsy fantatra ny mombamomba azy hatramin’izao. Somebiseby avokoa ny olona rehetra teo amin’ny manodidina tamin’io fotoana io, etsy andaniny ny rà nandriaka eraky ny arabe izay nampihoron-koditra ka izany no nahafahany nitsoaka.
Nandray fepetra avy hatrany ny avy eo anivon’ny mpitandro filaminana tao an-tampon-tanàna nony avy eo ka ny fiaran’ny Emmoreg no nitondra ny razana tany amin’ny tranom-paty.
Mbola mitohy ny fanadihadiana momba ny raharaha amin’izao fotoana izao.